कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ, एनटीसीमा एचडी भ्वाइससहितको नयाँ सेवा ? - Nepal Post Daily
कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ, एनटीसीमा एचडी भ्वाइससहितको नयाँ सेवा ?
काठमाडौं, ३ जेठ । विश्व दूरसञ्चार दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले आजबाट फोरजीमा आधारित भ्वाइस ओभर (भिओ) एलटिई सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ ।
Previous articleघट्दै संक्रमण र मृत्यु
Next articleकाठमाडौँमा : परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि